Caalamka oo Walaac ka Muujiyay Saxiixii Madaxweyne Donald Trump uu Muslimiinta ku Beegsaday (VIDEO) - Hablaha Media Network
Caalamka oo Walaac ka Muujiyay Saxiixii Madaxweyne Donald Trump uu Muslimiinta ku Beegsaday (VIDEO)
HMN:- Qodobadii uu saxiixay madaxweyne Donald Trump uu ku hakiyay dadka ka safraya todobo dal oo Muslimiinta u badan yihiin ayaa waxaa cambaareeyay ururada xuquuqda aadanaha u dooda ee daafaha caalamka ku nool.
Qaar ka mid ah xisbiyada dhinaca midigta u janjeera ee qaaradda Yurub ayaa soo dhoweeyay tallaabadaasi uu qaaday madaxweyne Donald Trump.
Qaramada Midoobeey: ayaa ugu baaqday Trump inuu sii wado soo dhoweynta qaxootiga, ayadoo aan la eegeyn jinsiyadooda, dalka ay ka soo jeedaan iyo diintooda.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Sigmar Gabriel, wuxuu sheegay in Mareykanka iyo Yurub ay isku mid ka yihiin aragtida “reer galbeedka” ee xuriyadda iyo dimuquraadiyadda, oo ay ka mid tahay difaaca xuquuqda dadka ka qaxaya colaadaha iyo in la difaaco dadkaas. “Waxaan u maleynayaa in arrinta na kulmisa ay tahay Galbeedka, waana taasi midda aan u cadeyneyno Mareykanka.”
Madaxweynaha Iraan, Xasan Ruuxaani ma uusan soo qaadin Trump magaciisa, laakiin wuxuu sheegay: “Maanta maaha xilliga gidaar lagu kala jaro dalal. waxay ilaabeen in derbigii Berlin uu dumay sanado ka hor,” Ruuxaani ayaa intaa ku daray in “Maanta ay tahay xilligii nabadda si wada jir ah looga shaqeyn lahaa, balse aanan la joogin waqti keli la noqdo oo dalalka kale laga fogaado.” Iraan waxay ka mid tahay dalalka uu Trump saaray 90-ka maalmood ee xanibaadda.
Shirkadda Google waxay hakisay shaqaaleheeda Muslimiinta ah ee dibadda ka soo safri lahaa. Shirkadda waxay BBC-da u sheegtay inay ka walaacsan tahay tallaabada oo Mareykanka ka xanibeysa dad badan oo xirfadlayaal ah.